OweChippa ufuna balwe ukuvika izembe - Impempe
OweChippa ufuna balwe ukuvika izembe
IChippa United izithola isesimeni esinzima kakhulu njengoba ilwa nokungadliwa yizembe kwiDStv Premiership, kanti ngakolunye uhlangothi izodlala owamanqamu weNedbank Cup.
IChilli Boys inethuba elihle kakhulu lokuwina indebe yayo yokuqala emlandweni kodwa konke lokho ngeke kusho lutho uma izogcina idliwe yizembe ishone nayo ehlathini iNedbank Cup. Njengamanje ezikaSiviwe “Chippa” Mpengezi zizithola zisendaweni yesibili ukusuka emsileni ngamaphuzu angu-17 emidlalweni engu-22.
IChippa izobhekana neBaroka FC emdlalweni weligi eNelson Mandela Bay Stadium, ngoLwesibili ngo-3 ntambama. Kumele nakanjani izame ukuwina lo mdlalo uma izimisele ngokubalekela izembe elibukeka liyizingela.
U-Ismail Watenga ovimbela iChilli Boys uthi kuhle ukufika kowamanqamu kodwa kuzomele balwe ngakho konke ukuze bavike izembe.
“Ngifisa ukubonga usihlalo wami, abaqeqeshi nabalandeli bethu ngokukholelwa kithina. Ngifuna ukubonga uMdali ngokusenza ukuthi sifinyelele kowamanqamu. Ngiyazi kungokokuqala eqenjini lethu,” kusho uWatenga obolekiswe yiMamelodi Sundowns kwiChippa.
“Sonke sijabulile futhi sithatha umdlalo ngamunye ngesikhulu isineke. INedbank Cup ibiyinhle futhi inkulu kithina, iphakamisa ukuzethemba kwethu, ngiyethemba lokhu kuzosisiza emidlalweni yeligi.
“Ukukhuluma ngomdlalo wethu olandelayo sidlala neBaroka futhi ngiyazi kuzoba umdlalo onzima kakhulu, ngeke kube lula. Kodwa sizolwa ngoba sidinga amaphuzu amathathu. IBaroka siyilindele kodwa sisemeni esinzima njengeqembu. Sizolwa ngayo yonke indlela ukuqinisekisa ukuthi siyalibalekela izembe,” kusho uWatenga.
IChippa isanda kuxosha uDan “Dance” Malesela kanti selokhu ehambile lo mqeqeshi ayikawini nowodwa umdlalo weligi. Nokho izinto zihamba kahle kwiNedbank Cup.
“Ngiyajabula ukuthola ithuba lokudlalela leli qembu elikhulu kangaka, iChippa United. Ngifisa ukubonga abaqeqeshi nabo bonke abantu abakholelwa kimina. Ukudlala kwami kwiChippa kusiza iqembu lesizwe futhi kuyangisiza ukuthi ngikhule. Nokho okwamanje ngibeke umqondo wami kakhulu eqenjini ukuqinisekisa ukuthi ngidlala kahle,” kuphetha uWatenga.
Previous Previous post: Ukhulumise okwebutho ephaka impi yeSundowns uMothwa woSuthu
Next Next post: Angase axoshwe aweSuper League kwiChampions League